काठमाण्डौ । महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राले थुप्रै नयाँ कार ल्याउने तयारीमा लागेको छ। कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण कारहरु लन्चिङमा ढिलाइ भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। यसबीच कम्पनीले शानदार दुई एसयूभी भारतीय बजारमा लन्च गर्ने भएको छ। ती कारका विशेषहरु जानौँ। नयाँ थार नयाँ महिन्द्रा थार लामो समयदेखिको प्रतिक्षा छिटै सकिँदैछ। न्यु जेनरेसन...
मारुती सुजुकी यसै वर्षभित्र ल्याउँदै यी तीन शानदार कार, के–के छन् त विशेषता ?
काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता कम्पती मारुती सुजुकी यो वर्ष थप तीन नयाँ कार लन्च गर्ने तयारीमा छ। यही वर्ष मारुती सुजुकी नयाँ तीनवटा कार लन्च गरिएको छ। जसमा मारुती ब्रेज्जा, मारुती इग्निस र मारुती डिजायर रहेका छन्। अब फेरि मारुती सुजुकीले लन्च गर्न लागेका ३ नयाँ कारका विषयमा यहाँ चर्चा गरौँ। मारुती सुजुकी ए...
बर्खायाममा बाइक चलाउँदा यी कुरामा अवश्यक ध्यान दिनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्
काठमाण्डौ। बर्खायाम सुरु भइसकेको छ। हिजोआज प्रायः दैनिकजसो पानी परिरहेको छ। यदि तपाइँ टु ह्विलर (बाइक वा स्कुटर) चलाउनुहुन्छ भने पानी परिरहेको बेला तपाइँ केही विशेष कुरामा अवश्य ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। यी विशेष कुरामा ध्यान नराखी पानी परिरहेको बला तपाइँले बाइक वा स्कुटर चलाउनुभयो भने खतरनाक हुन सक्छ। यहाँ हामी तपाइँलाई केही विशेष...
होन्डाले बजारबाट फिर्ता मगायो ६५.५ हजार युनिट डिफेक्टिभ कार , कुन–कुन ?
काठमाण्डौ । फ्युल पम्पमा गडबडी देखिएपछि होन्डा कम्पनीले ६५ हजारभन्दा बढी युनिट विभिन्न मोडलका कार बजारबाट फिर्ता मगाएको छ। फ्युल पम्पमा देखिएको गडबडीका कारण गुडिरहेको कारको इन्जिन बन्द हुने, स्टार्ट नै नहुनेजस्ता समस्या देखिन थालेपछि होन्डा कम्पनीले विभिन्न मोडलका ६५ हजार ६५१ युनिट कार बजारबाट फिर्ता मगाएको हो। कम्पनी यही २० जुन...
पावरफूल इन्जिनका साथ ‘बीएमडब्ल्यू एक्स सिक्स’ कार लन्च, यस्ता छन् विशेषताहरु
काठमाण्डौ । बीएमडब्ल्यू कम्पनीले बिहीबार भारतीय बजारमा नयाँ बीएमडब्ल्यू एक्स सिक्स कार लन्च गरेको छ। यो कुप एसयूभी दुई भेरियन्ट एक्स लाइन र एम स्पोर्टमा बजारमा ल्याइएको छ। दुवै भेरियन्टको मूल्य भारु ९५ लाख रहेको छ। यी दुवै नयाँ एसयूभीमा अहिले केवल पेट्रोल इन्जिन दिइएको छ। केही समयपछि यी कार डिजेल इन्जिनमा पनि आउने आशा गरिएको...
काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनहरुको बजार ध्वस्त पार्ने र यस्ता साधनको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित पार्ने गरी अन्तशुल्क, कर तथा भन्सारका दरहरु अचाक्ली बढाएकोमा नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट बाचन गर्ने क्रममा विद्युतीय सवारी...
काठमाण्डौ । अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएसन(नाडा)ले सरकारबाट प्रस्तुत बजेट मिश्रित रहेको बताएको छ । अन्य सवारीको हकमा बजेट यथास्थितिमा रहे पनि विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क गरी २५ प्रतिशतले बढाइएकोमा नाडाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । यो व्यवस्थाले विस्तार हुँदै गएको विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने र...
काठमाण्डौ । नेपालमा कियाको विद्युतीय गाडी निरो बुकिङ गरेका ग्राहकले लकडाउन खुलेलगत्तै उक्त एसयुभी चलाउन पाउने भएका छन् । नेपालका लागि कियाको एकल अधिकृत बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिले लकडाउन खुलेलगत्तै बुकिङ गरेका ग्राहकलाई उक्त गाडी हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । उक्त गाडीको कन्साइनमेन्ट (खेप)...
काठमाण्डौ। देशव्यापी गर्मी सुुरु भइसकेको छ। दिउँसो तापमान धेरै भएकाले घरबाहिर निस्कनै कठिन हुुुन्छ। यस्तो बेला कतै बाहिर जानुुुपरेमा कारमा जानुु राम्रो हुुन्छ। किनकि कारको यात्राका दौरान गर्मीबाट बचिन्छ नै एसी भएका कारण आनन्दित पनि भइन्छ। तर गर्मीको मौसममा तपाइँ आफ्नो कार कूूल र फिट राख्न चाहनुुहुुुन्छ भने कारको सही हेरविचार गर्न...
काठमाण्डौ । स्कोडा भारतीय बजारमा ३ नयाँ कार ल्याउन गइरहेको छ। यसमध्ये नयाँ स्कोडा करोक एसयूभी, सुुपर्व फेसिलिफ्ट र रेपिड १.० टीएसआई समावेश छन्। यी तीनैवटा कार आगामी मे २६ तारिखका दिन लन्च हुुँदैछ। आउनुुस् यी ३ कारका बारेमा जानकारी लिनुुस्ः स्कोडा करोक यो स्कोडा भारतमा आउने निकै बहुुुुुप्रतिक्षित कारहरुमध्ये एउटा हो। यो एसयूभी केबल...
युरोपभर कार बिक्रीमा ७६.३५%को गिरावट, इटाली र स्पेन बढी प्रभावित
काठमाण्डौ । गत अप्रिल महिनामा युुरोप क्षेत्रको कार बिक्रीमा नाटकीय गिरावट आएको देखाएको छ। युुरोपभर लागू गरिएका लकडाउनका कारण त्यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्रको कार डिलरसिप, उत्पादन र बिक्री ठप्प भएको छ। युुरोपियन अटोमोबाइल म्यानुुफ्याक्चर एसोसिएसनको आँकडाअनुुसार अप्रिल महिनामा नयाँ कार खरिदका लागि गरिएको रजिस्ट्रेसनमा ७६.३ प्रतिशतको...
तयार भयो अनौठो इलेक्ट्रिक बाइक, ब्यागमै बोक्न सकिने, तौल ५ किलोमात्र
काठमाण्डौ । तपाइँ थुप्रै प्रकारका युनिक बाइक वा स्कुटर देख्नुभएको होला। तर के यस्तो बाइक देख्नुभएको छ जसलाई फोल्ड गरेर राख्न वा ब्यागमा बोक्न सकिन्छ ? सायद छैन होला। जापानका केही रिचर्सहरु एउटा यस्तै युनिक इलेक्ट्रिक बाइक बनाएका छन्। जसलाई आवश्यक नपर्दा फोल्ड गरेर सजिलै राख्न वा ब्यागमा हालेर बोक्न सकिन्छ। पोइमो नाम दिइएको यो...
काठमाण्डौ। तपाइँले बिनास्ट्यान्ड खडा गर्न (अड्याउन) सकिने बाइक देख्नुभएको छ ? अब तपाइँ सोच्नुहोला बिनास्ट्यान्ड पनि कुनै बाइक खडा गर्न सकिन्छ र वा भन्नुहोला बिनास्ट्यान्डका बाइक पनि हुन्छन् र ? हजुर यो सम्भव छ। यो सम्भव गरेको छ बीएमडब्ल्यू कम्पनीले। यो कम्पनीले बिनास्ट्यान्डको बाइक बजारमा ल्याएको छ। अर्थात् बिनास्ट्यान्ड पनि यो बाइक...